I-Mini Joy Apk Khuphela kwi-Android [kutsha nje ngo-2022]-Luso Gamer
I-Mini Joy Apk Khuphela kwi-Android [kutsha nje ngo-2022]
Aprili 25, 2022 January 27, 2022 by Indlela yeShweta
Sonke siyakuthanda ukudlala imidlalo kodwa bambalwa kakhulu abantu abaziyo ukuba banokuzuza kuyo. Ewe, uyivile kakuhle into yokuba uneqonga apho unokudlala khona kwaye uphumelele amabhaso ayimali. Iqonga elinjalo linikezelwa yile App emangalisayo eyaziwa ngokuba yi "Mini Joy Apk" ??.
Yintoni iMini yoNwaba
Apha ungonwabela iitoni ze-arcade, i-RPG kunye nezinye iinkqubo zokudlala ezakhelweyo. Akukho mfuneko yokuba ukhuphele nayiphi na isoftware yokudlala ngokwahlukeneyo kuba sele ikho ngaphakathi kwesi sicelo esinye endisabelathe apha.
Apho awunguye kuphela umdlali ozonwabisa nowamkela imali eninzi kodwa kukho izigidi zabantu.
Yenzelwe ngokukodwa abasebenzisi be-Android baseIndiya. Kuba kuya kufuneka ukuba ube nenombolo yefowuni yaseIndiya yokuqinisekisa iakhawunti yakho. Ngaphandle koko abasebenzisi baseIndiya abayi kulifumana eli thuba.
Nangona kunjalo, akukho mntu uqinisekile ukuba kwixesha elizayo uya kufumaneka kwamanye amazwe okanye hayi. Kodwa sinethemba lokufumana okungcono njengoko izicelo ezinjalo zinokunceda kakhulu ukubonelela ngobomi babantu abangaphangeliyo.
le Dlala kwaye uzuze iqonga lokudlala liphuhlisiwe kwaye linikezelwa yiMiniJoy Tech Private Limited yee-smartphones kunye neetafile ze-Android.
Apha unokudlala wedwa okanye kwimowudi yabadlali abaninzi apho unokubiza abahlobo bakho ukuba bakujoyine. Ngaphaya koko, uya kumenywa ukuba uthathe inxaxheba kwimisitho emikhulu yemidlalo ye-intanethi ngaphakathi kweli qonga.
Ke, abaphumeleleyo banokufumana amabhaso amakhulu emali. Akukho ntlawulo kunye nobhaliso olufunekayo ukuqala uhambo lwakho ngale App. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wenze iakhawunti nge-ID yakho kaGoogle okanye i-Facebook ID.
Kodwa njengoko benditshilo ngaphambili ukuba kufuneka ube nenombolo yeselula yaseIndiya yokudlala kwaye uthathe inxaxheba. Ngaphandle koko, iya kunika ukufikelela kwi-app kodwa awukwazi ukudlala okanye ukuthatha inxaxheba kumatheko ngaphandle kokuqinisekiswa kweselula.
igama Ubumnandi bemini
ubungakanani 24.2 MB
umbhekisi I-MiniJoy Technology co. LTD
Igama lepakheji com.mini.uvuyo
Iyafuneka i-Android 4.2 kunye no-Up
Mingaphi iMidlalo ekwiMini yoNwabo?
Ukuba unomdla wokwazi malunga nokuba zingaphi iindlela zokudlala oza kuba nazo eM Mini Joy Apk ke nantsi impendulo yakho.
Phantse kukho iinketho ezingama-20 onazo ezibandakanya iPhuli, Ungaze uyeke, ukuCube Craze, ukutsiba okungaqhelekanga, iiHops, iiBhloko kunye nezinye ezininzi. Apha ungadibanisa neziganeko ukufumana amabhaso amangalisayo kwaye ungakwenza oko ngaphandle kotyalo mali.
Kukho ukhetho kwabo bajoyina isicelo okokuqala. Kuba xa umtsha kwinto ethile ngoko kwenza ukuba kube nzima ukuqala.
Ke, unokukhetha uqeqesho apho ungakhokelwa khona kwizigaba zokuqala. Xa uya kuphucula ngokuthe ngcembe kuwe uya kuba nethuba lokuya kwimicimbi emikhulu kunye nemiceli mngeni.
Uyidlala njani iMidlalo
Kulula ukudlala, kodwa ukuze uhlale uphumelele kuwo wonke umdlalo kufuneka usebenze nzima.
Ukuba awuyiniki ingqalelo yakho efanelekileyo kutheni umntu ekuhlawula? Ke, kufuneka ugcine ugxile kwintsebenzo yakho kwaye uzame ukuyiphucula yonke imihla. Nangona kunjalo, kukho iindidi ezahlukeneyo zendlela onokuthi uyonwabele umdlalo wakho.
Eli linqanaba lokuqala labo bajoyine i-App okokuqala. Apha ungadlala imidlalo xa ungaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye ucinga ukuba awukakulungeli ukukhuphisana nabadlali bokwenyani kwi-Intanethi.
Kodwa kuya kufuneka amakhadi oqeqesho ukuqala uhambo lwakho ngemodi yoqeqesho. Ke, kwiphepha elinye unokuba nomjikelo omnye kwaye xa ulahlekile uya kulahleka kunye nelinye ikhadi.
Nangona kunjalo, awudingi ukukhathazeka ngamakhadi kuba uza kufumana amakhadi oqeqesho amabini yonke imihla. Kodwa emva kokhuphiswano lwekhulu lomjikelo, awuzukufumana mvuzo. Ngokusisiseko, unokufumana iingqekembe kunye namanye amabhaso kumvuzo.
Kwindlela yokhuphiswano, uya kukhuphisana nabadlali bokwenyani abavela kulo lonke ilizwe. Ke, zilungiselele ukubetha kwaye uphumelele amabhaso angaphezulu kwemali.
Kumnandi kakhulu ukuba nomdlalo nabadlali bokwenyani. Xa ujoyina ukhuphiswano, uya kufaniswa nomnye umdlali ngokungaqhelekanga sisicelo.
Unokwenza izihlobo kwaye ukhuphisane nabo ngokuthumela izimemo zokhuphiswano. Kodwa ukuze uthathe inxaxheba kule ndlela kufuneka uhlawule uvuyo. Uvuyo yingqekembe ebonakalayo yomdlalo onokuthi kwakhona ubize ingqekembe.
Nangona kunjalo, unokufumana ii-JOY zemali yasimahla ngeveki, xa ungena kwiakhawunti yakho yonke imihla. Nangona kunjalo, awudingi kukhathazeka malunga nale nto kuba xa ujoyina ukhuphiswano uya kufumana u-JOYS ophindwe kabini okanye ngaphezulu koko.
Uyifumana njani imali ngeMini ye-Joy Apk?
Sele ndikunikile ulwazi olusisiseko malunga neSicelo oza kusikhupha apha. I-Mini Joy Apk iyinyani kwaye ikuhlawula ngesiqinisekiso se-100%
Ke ngoko, akufuneki ukhathazeke malunga nokurhoxiswa kwayo ukuze ugxile kwimidlalo yakho. Ngoku ndiza kuxela ngokweenkcukacha indlela onokuthi uzuze ngayo apha.
Ndikuxelele malunga noLonwabo ukuba sisibonelelo esisisiseko kwi-App. Le ngqekembe inokubakho njengempahla yakho esisiseko onokuyikhulula ngentlawulelo yimali. Kuthetha ukuba xa unemali engaphezulu kunye nengaphezulu ke uya kuba nethuba elikhulu lokufumana imali enkulu.
I-1000 JOYs inokuhlawulelwa nge-1 e-Indian rupee. Ke, ngoku ungacinga ukuba ingakanani imali onokuyifumana apha. Kungenxa yokuba umvuzo weengqekembe kwesi sicelo ulula kakhulu zininzi iindlela zokufumana umvuzo.
Okokuqala, unokufumana iingqekembe ezingama-500 xa usenza iakhawunti okokuqala. Emva koko ufumana ngaphezulu kwe-200 emva kokugqitywa kwayo yonke iprofayili. Ngapha koko, ngemini nganye ufumana umvuzo wokungena kwiJOYI.
Unokujonga iiVidiyo ukuze ufumane izibonelelo ezininzi kunye namabhaso onokuwukhulula ngemali yokwenene.
Xa umema abahlobo bakho kwaye baya kuthi bazimanye kwisimemo sakho ungafikelela kwi-rupees ezi-10 zaseIndiya. Yindlela onokuthi uzuze amawaka amawaka amabhaso ezinkozo apha.
Eyona ndlela endinokukucebisa ukuba uzuze ngayo kukudlala ngokusemandleni akho kwaye uphumelele iingqekembe zemali uze uziguqulele kwimali yangempela.
Ukurhoxisa imali kwi-App?
Xa isixa sakho siya kudlula kumda wokurhoxiswa uya kufumana iintlawulo zakho ngakwimali eyi-Paytm. Kodwa kuya kufuneka ubhalise iinkcukacha zeakhawunti yakho ye-Paytm. Ngaphezulu, kuya kufuneka ubhalise ngolwazi olusemthethweni kunye nolokwenyani le-app.
Kukho ukhetho lwe-wallet kwiprofayile yakho ngoko nqakraza kuyo kwaye ujonge isixa sakho kwaye urhoxe apho. Xa imali izodluliselwa kwiakhawunti yakho emva koko uyakufumana isaziso ngesicelo.
Ngapha koko, ukuba ubhalise iakhawunti yakho ye-Paytm kuya kufuneka uyenze i-KYC.
Unokutshekisha kwi-Paytm ye-App yakho ngesixa osifumeneyo.
Ukuba awuyifakanga i-Paytm Apk ke nceda ucofe igama elifakiwe kwaye ukhuphele ifayile ye-Apk kwaye uyifakele kwiifowuni zakho.
Okanye ungasebenzisa kwakhona iqhosha lokuKhangela elikhoyo kwikona ephezulu yewebhusayithi ukuyikhangela.
Ke, olu yayikukuphononongwa kwesicelo se-Android esinika iqonga lokudlala imidlalo kunye nokufumana imali yokwenene. Zininzi kakhulu ii -apps ezinjalo ezikhoyo kwimarike kodwa ayifani nale inikezela ngeempawu eziluncedo.
Ukuba unomdla wokukhuphela uguqulelo lwakutshanje lweMini Joy Apk ye-Android, nceda ucofe ngezantsi iqhosha lokukhuphela.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Ubumnandi bemini, Mini Uvuyo APK, I-Mini Joy App, Dlala kwaye uzuze Post yokukhangela
UDompet Kecil Apk Khuphela kwi-Android 
Ukhuphelo lwe-Flappy Royale ye-Android [entsha ka-2022]